बिरामीका कुरूवाले गरे डाक्टरमाथि कुटपिट
काठमाडौं। मेची अस्पताल भद्रपुरका डा. केवल कपुरीमाथि बिरामीका कुरूवाले कुटपिट गरेका छन्। उनलाई हल्दिबारी गाउँपालिकाका ४० वर्षीय पुष्पराज निरौलाले आइतबार राति आकस्मिक उपचार कक्षमा कुटपिट गरेका हुन्।
श्रीमती बिरामी भएपछि उपचारका लागि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेका निरौलाले उपचारमा संलग्न डा. कपुरीमाथि अनावश्यक विवाद गरी कुटपिट गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ड डा टङ्कप्रसाद बाह्रकोटीले बताए।
‘हामीले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छौं’, उनले भने,‘बिरामीको उपचार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी कर्तव्यबाट च्यूत हुँदैनौं, तर उपचार गर्ने डाक्टरमाथि बिना कारण अस्पतालमै कुटपिट गर्ने जुनसुकै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।’
डा. कपुरीले घटनाका दोषीमाथि कारबाही गरिपाउँ भनी आजै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राकेश थापाले उजुरीका आधारमा घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्ने जानकारी दिए। घटनाको छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही नभएसम्म स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालका सम्पूर्ण आकस्मिक सेवा बन्द गरेका छन्। रासस